Fitsangatsanganana sary " Journey-Assist - Ahoana no fomba hianarana maka sary.
Pejy fandraisana » Ny karazana fitsangatsanganana » Photo Tours
Ny fitsidihana sary dia karazana fitsangatsanganana voalamina, izay natao ho an'ireo mpankafy sary izay te hijery zorony mahaliana amin'ny planeta ary, eo ambany fitarihana mahefa, dia misambotra ny hakanton'ny kalitao avo lenta miaraka amin'ny fanampian'ny "SLR".
Mitovy amin'ny fitsangatsanganana vondrona hafa, ary ny fitsangatsangan-tsary dia manondro azy ireo manokana; indraindray azo atao ihany koa ny mandamina fitsangatsanganana tsirairay miaraka amina mpampianatra mpaka sary. Ny fizahan-tsary dia manomboka ary mifarana amin'ny andro efa nifanarahana, nanambara volana roa (na mihoatra) alohan'ny hanombohan'ny programa, ka tsy handeha ny dia "isaky ny tianao". Ny tombony dia miankina amin'ny fahafahanao mifandray amin'ireo olona mitovy fisainana aminao, manatsara ny fahaizanao ary mizaha toerana tsara tarehy manaitra.
Ny fitsidihana sary dia misy fitsidihana tarika amin'ny natiora. Saika azo zahana ny lalana rehetra momba ny fizahan-tany, satria any amin'ny firenena rehetra dia misy sary miavaka, ary azonao atao koa ny mahita ny endrika ivelany amin'ny fiainan'ny mponina eo an-toerana sy ny mponina hafa, izay tsy maintsy "takarina". Matetika koa ny fitsangatsanganana sary dia mety misy Safari!
Ny tombontsoa amin'ny fizahan-tany voalamina
Mety hipetraka ny fanontaniana hoe inona ny dikan'ilay fitsidihana sary, raha afaka mandeha any amin'ny firenena mahaliana ianao, maka "DSLR" hahafahana maka sary avo lenta be any. Mikasika ny haavon'ny fahaizan'ny sary dia azo hatsaraina tsara amin'ny sekoly fakana sary amin'ny sarany ambany, tsy mila mandeha na aiza na aiza. Ny fitsangatsanganana sary dia ahitana ny sary voaporofo amin'ny sary, ary koa ny fitarihan'ny olona matihanina, koa ny "plein air" dia ampiarahina amin'ny "kilasy", voarobaky ny fizahan-tany amin'ny firenena vaovao.
Iray amin'ireo tombony lehibe amin'ny fizahantany sary ny fisian'ny lalana voafaritra. Ny fitaovam-pivoriana dia hita na dia ao amin'ny Gobi Gobi (Central aza Asia). Saingy raha misy fientanentanana manan-karena ny tanjonao dia tsy azo atao ny mandalina samirery ny endri-javatra tsirairay amin'ny toerana mahomby any amin'ny firenena, raha toa ka manipy fijery samihafa miaraka amin'ny fakantsary ary torolàlana eny an-tananao tsy azo antsoina hoe manam-pahafahana. Mandritra izany fotoana izany, mandritra ny fitsidihana sary voalamina dia afaka mitsidika toerana mandresy ianao amin'ny sary, mba tsy hahalasa saina momba izay zavatra mendrika hatao maka sary.
Tombony iray hafa amin'ny fandaminana ny mampiavaka ny fikambanana - ny nuansa isan'andro izay ampidirina amin'ny fitsidihana sary, afa-tsy ny singa kanto. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia tsy ilaina ny mandany fotoana amin'ny famandrihana hotely eny amoron-dalana, miady varotra amin'ireo mpamily fiarakaretsaka, mitady trano fisakafoanana - ataon'ireo mpikarakara izany. Izy ireo koa dia tompon'andraikitra amin'ny tsy misy dikany toy ny mifoha amin'ny fakana sary amin'ny maraina. Ho setrin'izany, malalaka ny fotoana amin'ny fakana sary azy.
Ary koa, ireo mpandray anjara amin'ilay fitsidihana sary dia manana fotoana tsy manam-paharoa hianarana amin'ny tompony mitarika ny vondrona. Ary ity dia fomba tsara iray hahatsapana ny angovo tsy hay lazaina ihany koa. Rehefa dinihina tokoa, rehefa mivory ny vondron'olona liana amin'ny zavatra iray ka mahatsapa fatratra ilay zavatra - satria na Taj Mahal azo tifirina ao amin'ny zoro arivo hafa. Ny fanondro ny sasany amin'izy ireo dia andraikitry ny mpikarakara.
Ny haavon'ny "fanitrihana" sy ny hamafin'ny "famolavolana" fahaizana sary ho an'ireo mpandray anjara amin'ny fizahan-tany ataon'ny mpanoro hevitra dia manan-danja ihany koa izay lafin-javatra mendrika hodinihina alohan'ny hamandrihana fitsidihana sary. Zava-dehibe raha hampianarina fahaizana sary ianao na "ampidinina" tsotra fotsiny amin'ny teboka "feno", manolotra ny fakana sary anao.
Raha iray amin'ireo liana amin'ny "hardcore" fotsiny ianao dia tokony hiditra ao fitsidihana kilasy master... Raha eo amin'ny fitomboan'ny matihanina dia mendrika izany! Ao anatin'ny 7-10 andro amin'ny fandaharana dia mila maka sary eo ambany fanaraha-mason'ny matihanina ianao. Ny fitsangatsanganana toa izao dia hiasa bebe kokoa noho ny fialam-boly! Tsy hisy fotoana fialan-tsasatra mahafinaritra. Na izany aza, ny fahalalana dia ho azo amin'ny fatra farany ambony. Ny kilasy mazàna dia midika ho tahirin-kevitra maro momba ny teôria, izay ampiharina haingana amin'ny fampiharana. Isaky ny hariva dia misy "debaire", izay anaovan'ny matihanina fanadihadiana an-tsary ny sarin'ny tsirairay amin'ireo mpikambana ao amin'ny vondrona, mampianatra azy ireo hialana amin'ny lesoka amin'ny manaraka.
Ny kinova malefaka amin'ny "hardcore" dia ny fitsangatsanganan'ny sary azy amin'ny heviny mahazatra indrindra amin'ny teny. Ny fitsidihana sary dia misy fiofanana sy sary tsy miankina tsy miankina, ary koa fitsaharana mahazatra an'ny mpizahatany. Mihevitra ny fivezivezena eny amin'ny làlana izy io, fa izay tena halainao sary dia miankina aminao fa tsy olon-kafa. Mazava ho azy, ny tompony, tsy latsa-danja noho ny amin'ny tranga voalohany, dia hanampy amin'ny fifehezana ny tsiambaratelon'ny asa, saingy tsy misy fomba fanao isan'andro henjana. Miankina bebe kokoa aminao ny fahombiazan'ny lafiny fanabeazana amin'ny dia toy izany!
Farany, foto-pahafahana - Ny tena mpizahatany amin'ny fizahantany sary. Ao anatin'izany fandaharana izany, ny fahafahana tanteraka sy ny fahaleovantenan'ny mpandray anjara amin'ny dia manjaka. Amin'ny maha-fitsipika azy dia samy manana baiko tena tsara amin'ny fakantsary izy rehetra ary tsy mila fiofanana, fa hiaraha-mitsangatsangana hitsidika ny zoro lavitra sy miavaka eto an-tany - avy any amin'ny alàlan'i Amazona ka hatramin'ny tampoka tsy fantatra amin'ny Tien Shan. Ny fivezivezena dia mitaky fiofanana ara-batana tsara ary ny fikarakarana ny fakan-tsary (sy ny fitaovana hafa - ny tripods, ny sivana, sns). Ny anjara asan'ny mpampianatra eto dia mihena aotra - matetika izy dia mpandray anjara mitovy amin'ny fizotrany.
Ny fitsidihana sary dia mahaliana foana, manankarena foana, tsara tarehy foana ... ary misy zavatra tianao hizara amin'ny hafa foana .... Ary koa, tsy afaka mandany vola amin'izany fotsiny ianao, fa mahazo koa. Misimisy kokoa momba an'io в ny antsika toro-hevitra mahasoa 😉